Sida loogu rogo midabada Photoshop | Abuurista khadka tooska ah
Sida loogu rogo midabada Photoshop
Lola curiel | 05/03/2021 12:14 | General, Qalabka Naqshadeynta, Photoshop, Tababarada, dhowr
Adobe Photoshop wuxuu bixiyaa kumanaan qalab iyo ficillo deg deg ah, aad iyo aad u tiro badan oo mararka qaar aan ku adkaano inaan xasuusano ama aan ogaano dhamaantood. Casharkan waxaan ka soo kabaneynaa mid ka mid ah talaabooyinka degdegga ah: maal gasho. Hadaad rabto inaad ogaato sida loo rogo midabada sawirka Photoshop ama sida loo abuuro sawir xun, ha u joojin akhriska qoraalkan!
1 Ku fur sawirka Photoshop
2 Sida loogu rogo midabada Photoshop
3 Gawaarida kumbuyuutarka si loo rogo midabada Photoshop
Ku fur sawirka Photoshop
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno ayaa ah fur sawirka aan dooneyno inaan ku dabaqno isbedeladan. Waxaan doortay muuqaal, xeeb, laakiin waxaad dooran kartaa sawirka aad doorbideyso. Xusuusnow inaad furi karto sawirrada Photoshop adoo si toos ah u jiidaya ama, haddii aad doorbido, adigoo tagaya liiska ugu muhiimsan, faylka iyo gujinta furan. Waxa kale oo jira toobiye kumbuyuutar, amar + ama (on Mac) ama xakamayn + ama (Windows).
Markaad furto sawirka, Waad rogi kartaa midabkiisa adigoo tagaya liiska kore, dhanka sawirka sawirka iyo meesha hoos-u-dhacda ayaan gujineynaa falka «invert». Markaad fulineyso ficilkan, waxaad arki doontaa in sawirku gebi ahaanba is beddelayo iyo in la abuuray saamaynta "sawirka xun".
Haddii aad eegto midabada waxaad arkeysaa in dhab ahaan loo rogay, waxa Photoshop asal ahaan sameeya uu yahay beddel pixel kasta oo leh ka soo horjeedkiisa chromaticTaasi waa sababta ay buluugyadu u aadaan midabada liinta, liinta midabbada buluugga ah iyo tan cad oo madow. Waxaan dib ugu cusbooneysiiyay isbeddeladaas sawir kale si aad si muuqata ugu arki karto. Haddii markii sawirka la rogo waxaan riixnaa amar + I markale, midabada ayaa mar kale dib loo rogay oo sidaas darteed waxaan dib ugu noqoneynaa nuqulkii asalka ahaa.
Gawaarida kumbuyuutarka si loo rogo midabada Photoshop
ka furayaasha keyboard-ka uu tabaha naga caawiya inaan waqtiga ilaalino markaan tafatirno ama naqshadayno Photoshop. Waxaan u rogi karnaa midabada si dhakhso leh haddii aan ku riixno kumbuyuutarka kombiyuutarka furayaasha amarrada + I, haddii aan la shaqeyno Mac, ama xakamee + I, haddii aan ku shaqeyno Windows.
Haddii aad ka heshay qoraalkan oo aad xiisaynayso wax badan ka ogow sida loo beddelo midabada Photoshop Waxaan kugula talinayaa inaad la tashato casharradan aad ku baran doonto beddel midabka asalka sawirka horeba midabka u beddel cunsurro kale, sida dharka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Sida loogu rogo midabada Photoshop
Waa maxay server biraha qaawan?